Web Tutorial avy amin'ny Semalt Expert amin'ny mpampiasa tsy manam-pahaizana
Amin'izao fotoana izao, ny Internet dia lasa loharano tokana ny loharanon'ny mpitantana sy ny tranonkala Ireo mpikaroka dia mitady ny zavatra ilainy. Ny tranonkala dia sehatra midadasika, ary mila mampiasa ny fitaovana havanana ny olona mba handraisany ny fampahalalana rehetra tadiaviny. Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra dia ny hahafantarana ny fomba fandinihana ny daty marina. Azonao atao, ohatra, izy ireo, raha te-hanamboatra labiera vita amin'ny labiera ianao, ary afaka mamakafaka ny vokany any aoriana.
Na izany aza, voalohany indrindra, mila fantarin'ireo mpampiasa ny fomba hanombohany amin'ny tetikasany. Raha maniry izy ireo, dia azon'izy ireo atao ny manamboatra labiera vita amin'ny labiera vita amin'ny labiera mampiasa ny Python.
Ny fanindronana amin'ny tranokala: fitaovana mahomby mahavokatra
Ny fanalana ny tranokala dia afaka manampy ireo mpikaroka web ho afaka mahita otrikaretina maro avy amin'ny tranonkala samihafa ao anaty aterineto. Tena fitaovana tena mahomby afaka manome valiny manokana ao anatin'ny minitra. Androany, manampahaizana mpivarotra maro no mampiasa io fitaovana io mba hanangonana ny vidiny, ny lisitry ny vokatra ary ny maro kokoa. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka mandefa mpangalatra tranonkala hanome azy lisitr'ireo vokatra tiany, ary koa ny valiny avy amin'ny tranokala e-shop. Raha ny marina, ny fanasitranana tranonkala iray dia fomba mahomby hanangonana ny angona izay ilainao ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra na ny tolotra atolotra.
Betsaka ny fanomanana
Ireo mpikaroka tranonkala izay maniry ny hanangana lojika ho an'ny varo-pahefana ampiasain'izy ireo dia mila manao ny drafiny manokana. Voalohany, mila manapa-kevitra ny karazana fampahalalana tian'izy ireo hiangona amin'ity tranokala ity na ity tranonkala ity. Azonao atao, ohatra, izy ireo mba hanintona pejy misy fampahalalana momba ny labiera. Ary tsy olana goavana izany fa maro ny tranonkala manome ity vaovao ity.
Jereo ny kôdeksa HTML
Raha tian'izy ireo hikaroka ny fampahalalana rehetra momba ny labiera, dia mila mijery ny code (HTML) pejin-tranonkala. Mila mitadidy izy ireo fa ny ankamaroan'ny tranonkala dia manolotra fomba iray hahafantarana ny vohikala maimaim-poana amin'ny HTML miaraka amin'ny tsindry fotsiny. Ohatra, ao amin'ny Google Chrome, ny mpikaroka web dia afaka mamantatra ankavanana amin'ny singa iray ao amin'ny tranonkala iray ary avy eo tsindrio ny 'Inspect,' raha te hahita ny code HTML.
Beers & Breweries Databases
Ny banky angon-drakitra dia mora tsotra ny mamorona. Ny mpikaroka amin'ny Internet dia tsy maintsy misafidy ireo sora-bolana rehetra ao anaty daty, hanala ireo duplicates ary hamerina azy avy eo. Amin'ny famerenana ny endriky, mamorona marika manokana ho an'ny labiera tsirairay. Ilainy io identifier io rehefa mamorona daty iray ho an'ny labiera satria izy ireo dia manana fahafahana mampifandray ny labiera tsirairay miaraka amin'ny mpamokatra zavamaniry manokana. Ankoatra izany, afaka mamorona daty iray ho an'ny labiera izy ireo ary hanolo ny angon-drakitra miverimberina momba ny brouwers, toy ny anarana sy toerana. Avy eo dia afaka mifanaraka amin'ny labiera tsirairay izy ireo miaraka amin'ny karazana labiera.
Ampiasao ny varimbazaha, toy ny tanàna sy fanjakana
Amin'ny alalan'ny angon-drakitra ho an'ny mpamokatra zavamaniry, dia afaka manao columns ho an'ny toeram-pambolena izy ireo, toy ny tanàna sy ny fanjakana izay misy ny mpamokarana tsirairay. Azony atao ny manavaka ireo variables roa ireo amin'ny alalan'ny fampiasana ny sehatra fizarana Source .